भीमसेन थापाको आमाले निर्माण गरेको धारो संरक्षण गरिदै | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
भीमसेन थापाको आमाले निर्माण गरेको धारो संरक्षण गरिदै
गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ महादेवटारमा करिब १८०० सालतिर निर्माण भएको धारा छ । जागेरश्वर माध्यामिक विद्यालयको परिसर भित्र पर्ने उक्त धारा भिमसेन थापाको आमा सत्यरूपा मायाले निर्माण गरेको इतिहास छ ।
धारामा रहेको शिलालेखमा यो कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । धारा नजिकै सोही ठाउँमा सत्यरूपा मायाले पौवा निर्माण गरेकी थिईन । बाटो हिड्ने बटुवाहरु बास बसुन, पानी पिउन भन्ने धेयले उक्त ठाउँमा पौवा निर्माण गरिएको थियो । राजधानी सम्म सवारी साधन नचल्दा, पहिले हिँडेर जानुपर्दा त्यहाँ मानिसहरु बास बस्थे । धारा भत्किने, जिणर् हुने खतरा भएपछि गाउँपालिकाले वडा कार्यालय मार्फत मर्मत सुरु गरेको छ । एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर अहिले धारा मर्मतको काम भईरहेको वडा अध्यक्ष बासु थापाले बताए । ‘धारामा पानी झरिसकेको छ, रङ्गरोगन गर्न बाँकी छ’ उनले भने । छोराको सम्झनामा धारा बनाएको इतिहासमा भेटिन्छ ।
गोरखा मिलन समाज पोखराले खोप्लाङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने
चुमनुब्री २ का बासिन्दालाई खाद्यान्न राहत वितरण
गरिमा श्रेष्ठले जितिन् पब्लिक च्वाइस अवार्ड
प्रचण्ड माधव समूहद्वारा सुवास नेम्वाङ र महेश बस्नेतसहित ७ जनामाथि कारबाही
सामी परियोजनाको बारेमा गोरखाका पत्रकारहरुसँग छलफल